Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: DOORSISAA FI SHORORKEESSI BIFA GARAGARAA DALDALTOOTA OROMIYAA IRRA GA’U FUDHATAMA HINQABU 12/09/16
DOORSISAA FI SHORORKEESSI BIFA GARAGARAA DALDALTOOTA OROMIYAA IRRA GA’U FUDHATAMA HINQABU 12/09/16
Ganama kana magaalota Oromiyaa garagaraa irraa gabaasa hedduu argannee jirra. Gabaasonni kunneen akka argasiisanitti sababa hirmaannaa diddaa bittaa-gurgurtaa torban darbee irraan kan ka’e “mootummaan” daldaltoota “adabaa” jira. Magaalota akka Naqamtee fi Amboo keessatti Baajaajota turban darbe hojii dhaaban irratti (warren dhimma dhuunfaa isaaniif dhiisan dabalatee) “mootummaan” adabbii qarshii 10, 000 sassaabbachuuf gaafataa jira. Kun gonkumaa seeraan ala.
Gochi kun saamicha caasaa “mootummaa” fayyadamuun hojii irra oolchuuf yaalamaa jiru ta’uu isaa caalaa iyyuu, damee shororkeessa “mootummichi” diinagdee biyyattii irratti shaakalaa jiruuti. Tarkaanfiin karoorfame kun sababii sabni keenya diddaa bittaa-gurgurtaa irratti hirnmaachuun mirga isaa fayyadame qofaaf “adabbii siyaasaa” sabicha irratti qiyyaafatamedha.
Akka seerri biyyattii jedhutti yoo ta’e, daldalaan ykn hojiin daldalaa kam illee yeroo barbaade hojjetee yeroo barbaade immoo cufachuu danda’a. Kana malees, daldalaan kam illee dhuunfaadhaanis ta’e gareedhaan miidhaa gabaa irratti isa/isee quunnamuu fi dhiibbaa sirna siyaasaa faalamaan itti fidu kamiinuu faccisa karaa nagaatiin diduufis ta’e mormuuf mirga guutuu qaba/qabdi. Adabbiin hojii daldala seeraan alaa (yoo gochi akkasii raawwatame ta’e) raawwatamuu kan qabu seera durumaan tumamee lafa kaa’ame irratti kan kan hundaa’e qofa ta’uutu irraa eegama.
Tarkaanfii adabbii seera daldala biyyattiin ala ta’e kam illee seera-qabeessa miti, ykn yakka. Kanaaf, yaaliin “mootummaan” daldaltoota keenya adabuuf gochaa jiru doorsisaa fi gocha seeraan alaa qofaa utuu hintaane, matuma isaatiinuu yakka.
Sababa kanaaf, “mootummaan” ammaaf aangoo irra jiru doorsisa kana battalatti akka dhaabu akeekkachiifna. Keessumattuu, “mootummichi” tarkaanfiiwwan armaan gadii akka hatattamaan fudhatu hubachiifna:
1. Tarkaanfiiwwan doorsisaa maqaa “adabbii” jedhuun waamaman dogongora akka ta’anii labsuudhaan battalatti akka haqaman;
2. Miidhaawwan akaakuu garagaraa uummata irra ga’aa jiru, daldaltoota dabalatee, battalatti dhaabbachuu qaba;
3. “Mootummichi” tarkaanfii seeraan-alaa amma itti jiru kana battalatti hindhaabu taanaan uummanni keenya guutummaa Oromiyaa keessa jiru diddaa bittaa-gurgurtaa turban darbe irra ture amma illee haala qindaa’aadhaan akka ittifufu akeekkachiisuu feena.
4. Kana malees qaamni gaggeessituu fincila diddaa uummata Oromoo guyyoota lama keessatti guutummaa Oromiyaa keessatti fincila kan waamu ta’uu hubachiifna;
Hammasitti garuu, uummanni keenya bakkeewwan guyyaa har’aa irraa eegalee daldalli akka duraaniitti nagaadhaan itti fufaa jiru yoo ta’es tarkaanfiiwwan “mootummaan” aangoo irra jiru fudhatu xiyyeeffanaadhaan akka hordofu waamicha keenya dabarsina.
Daldalaan/daldaltuun kam illee doorsisa kafaltii maqaa adabbii jedhuun ittidhufu kamiinuu kaffaluu hinqabu/hinqabdu. Kana irra darbee “mootummichi” humnaan isaan kafalchiisuuf yaalii kan godhu yoo ta’e garuu daldaltoonni keenya manneen daldala isaanii battalatti cufuudhaan manatti galanii diddaa isaanii agarsiisuu qabu.
Haala akkasii keessatti, tarkaanfiiwwan diddaa uummanni keenya guutummaa Oromiyaa keessa jiru waliin ta’ee fudhachuu qabu guyyoota muraasa keessatti kan beeksisnu ta’a.
Sagaleen uummataa dhaga’amuu qaba!
Uummanni ni injifata!
Haqni ni mul’ata.
Posted by Hasan Ismail at 9:01 AM